"ဟုအဆိုပါရွားလှနာမကိုအမှီမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူသစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည်းနေရောက်လာပြီ ... " New York Times ကို (1897 ဆောင်းပါး)
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. "မော်တော်ယာဉ်" ၏ The New York Times '' ဖော်ပြထားခြင်းမီဒီယာအားဖြင့်သက်တမ်းကိုပထမဦးဆုံးပြည်သူပိုင်အသုံးပြုမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင် popularize မှကူညီပေးခဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်များအတွက် name ကို ။ နာမတော်အဘို့ credit သို့သော်အမှန်တကယ် Martini အမည်ရှိ 14 ရာစုအီတလီပန်းချီဆရာနှင့်အင်ဂျင်နီယာမှတတ်၏။ သူတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ကိုတည်ဆောက်ဘယ်တော့မှနေစဉ်, သူလေးဘီးနှင့်အတူလူတ-powered ရထားများအတွက်အစီအစဉ်များကိုတက်ဆွဲကိုပြု၏။
ရွေ့လျားဆိုလိုတာက ", မိုဘိုင်း" နှင့်လက်တင်စကားလုံး - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဓိပ်ပာယျ - သူဟာဂရိစကားလုံး "အော်တို" ပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်အမည်အားမော်တော်ယာဉ်နှင့်အတူတက် လာ. ။ အတူတူသူတို့ကိုထားသင်ကဆွဲထုတ်ဖို့မြင်းများမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ Self-ရွေ့လျားမော်တော်ယာဉ်ရရှိပါသည်။
၏သင်တန်းတစ်ခုမော်တော်ယာဉ်များအတွက်အခြားလူကြိုက်များနာမကိုအမှီလှည်းသို့မဟုတ်လှည်းဆိုလိုတာကဆဲလ်တစ်စကားလုံး 'carrus, "ကနေဆင်းသက်လာ, ကားဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော autobaine, autokenetic, autometon, Automotores မြင်း, buggyaut, diamote, horseless ရထား, mocole, မော်တာရထား, motorig, မော်တာ-vique နှင့် oleo လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းအဖြစ်ဤအပါဝင်သည်အမည်များအခြားအစောပိုင်းမီဒီယာကိုးကားရှိခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်အခြားအဘယျသို့မော်တော်ယာဉ်များအတွက်အမည်များရှိသည်ဟု နာမည်ကြီးမော်တော်ကားတီထွင်သူ အသုံးပြုသော? အထဲကရှာတွေ့တစ်ခုမှာကောင်းသောလမ်းကိုသူတို့မူပိုင် applications များများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်သောအမည်များကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောကားတစ်စီးအမည်များအကျဉ်း rundown င်:
အမေရိကန်တီထွင်သူ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာ Oliver အီဗန်မှဘာသာအရာ "oruktor amphiboles" ဟုသူကလို့ခေါ်တဲ့တီထွင်မှုများအတွက် 1792 ခုနှစ် Philadelphia တွင်တစ်ဦးကိုအမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထား "ကုန်းရေ digger ။ " သူ့မော်တော်ယာဉ်ထဲကရှင်းပြီတဲ့ရေနွေးငွေ့-powered ကားတစ်စီးဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် 1804. ၌သူ၏ဆိုင်ကနဦးသောင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကနျြးမာရေး၏ Philadelphia တွင်ဘုတ်အဖွဲ့အဘို့ဖန်ဆင်းဆိပ်ကမ်းဆီသန့်ရှင်းရေး, ယာဉ်ကိုရေနှင့်မြေယာနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျ Selden, Rochester, New York ကနေမူပိုင်ရှေ့နေ, သူကြောင့်အချိန်တွင်တည်ဆဲဥပဒေမှ 1879. အတွက် "လမ်းစက်" ဟုခေါ်ရာတစ်ခုခုကိုများအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည့်မူပိုင် 1877. Selden မှ Pre-ရက်စွဲပါခဲ့ကျော်က၎င်း၏တောင်းဆိုချက်များတိုးချဲ့ အနှစ်နှင့် 1895 အသုံးပြုပုံသူသုံးဆလင်ဒါမော်တော်ယာဉ်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကတကယ်ကားတစ်စီးထုတ်လုပ် enever စဉ်အခါ, မူပိုင်သူ့ကိုအားလုံးအမေရိကန်မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများထံမှအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson စုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများကားများတည်ဆောက်နိုင်ရန်မူပိုင်ခွင့်လိုင်စင်အခွင့်အရေးများအဘို့, Selden ရဲ့ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီလိုင်စင်ရ Automotive ထုတ်လုပ်သူများအသင်းမှပေးဆောင်။
ဂျော့ခ်ျ Selden တကယ်ကသူ့စိတ်ကူးနှင့်အတူမှတဆင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတချို့ထုတ်လုပ်သူမှမေးခွန်းထုတ်စရာအဆိုပါမူပိုင်ခွင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဟင်နရီဖို့ဒ် သည် Ford Motor Company ၏စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်တည်ထောင်သူ Seldon ရဲ့လိုင်စင်အခကြေးငွေနှင့်အတူပြဿနာကို ယူ. ပေးဆောင်ဖို့ငြင်းဆန်သောသူတို့အထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Selden 1904 ခုနှစ်တရားရုံး Ford ကားကို ယူ. , ဒါပေမယ့်တရားသူကြီးကဂျော့ခ်ျ Selden မူပိုင်ခွင့်အရသိရသည် built တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာတစ်ပြင်ပျက်ကွက်ခဲ့ Selden ရဲ့မူပိုင် 1911. Selden အတွက်မှောက်ခဲ့သည်မရှိတော့အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson စုဆောင်းကားတစ်စီးထုတ်လုပ်သူကဤဆက်ပြောသည်စရိတ်မပါဘဲအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာမိမိတို့၏မော်တော်ယာဉ်များတည်ဆောက်ရန်လွတ်ကြ၏နိုင်ဘူး။
အဆိုပါ Duryea ညီအစ်ကိုတွေကသူတို့ကမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၏အယူအဆကိုစှဲဖွစျလာသူစက်ဘီးချမှတ်သူများဖြစ်ကြသည် 1895. ခုနှစ်တွင်သူတို့၏ "မော်တာလှည်း" မူပိုင်ခွင့်။
သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်၏ '' Muckers ''
Cool ၏ခမညျးတျော - Willis Haviland Carrier နှင့်အဲယားကွန်း
အိုင်းရစ်သောက် toasted နှင့် Quotes
FIU GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
သမ္မတအိမ်တော် Debate ဟာသ
ထိပ်တန်း 10 ဦးနဲ့ Chris Brown ကသီချင်းများ
အမြင်တစ် 3D ပိရမစ်ကိုခပ်
အထီးကျန် System ကိုအဓိပ္ပာယ်
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇီဝ Make မှ Learn - အပိုင်း 1
လေ့လာမှုဗိသုကာအွန်လိုင်း - Web ပေါ်ရှိအခမဲ့သင်တန်းများ
အကောင်းဆုံးစတူဒီယို Ghibli လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု Away Spirited
Wintery '' 90 သီချင်းများပူနွေးသင်က Keep ရန်
စပိန်အတွက် '' ကတည်းက '' ဘာသာ